अमेरिका जान चाहनुहुन्छ ? भिसा लिन दिनुपर्नेछ फेसबुकको पासवर्ड - Karobar National Economic Daily
अमेरिका जान चाहनुहुन्छ ? भिसा लिन दिनुपर्नेछ फेसबुकको पासवर्ड
query_builderFebruary 10, 2017 9:47 AM supervisor_accountकारोबार visibility8453
वासिङ्गटन: राष्ट‍्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प आएपछि अमेरिका जाने आप्रवासीहरुको सपनामा एकपछि अर्को धक्का लागिरहेको छ।
यस्तोमा अमेरिकी संसद्मा फेसबुकसहितका सामाजिक सञ्जालको पासवर्डबारे पनि चर्चा चलेको छ । अमेरिका प्रवेश गर्नुअघि भिसाको प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित व्यक्तिको पृष्ठभूमि जाँच गर्न सामाजिक सञ्जालको पासवर्ड दिनुपर्ने व्यवस्थाबारे अमेरिकी संसद्मा चर्चा भएको छ ।
आगन्तुकको पुनरीक्षणलाई कडा बनाउनका लागि अमेरिकाले यस्तो व्यवस्था लागू गर्ने तयारीका लागि संसद्मा चर्चा थालिसकेको छ ।
अमेरिकी कांग्रेसको आन्तरिक सुरक्षा समितिको सुनवाईका क्रममा गृह सुरक्षा मन्त्री जोन केलीले भने, 'हामी केही मजबुत र केही अतिरिक्त जाँचमा विचार गरिरहेका छौँ, 'हामी पासवर्डसँगै उनीहरुसँग जोडिएका सामाजिक सञ्जालसँग जोडिएका अन्य जानकारी पनि माग्ने व्यवस्थाको तयारीमा छौँ ।'
'प्रतिबन्धमा परेका सात देशका मानिसको पुनरीक्षण वास्तवमै कठिन काम हो । तर उनीहरु यहाँ आउँछन् भने उनीहरुलाई कुन् वेबसाइट खोल्छन् ? हामी उनीहरुसँग उनीहरुका सामाजिक सञ्जालको पासवर्ड माग्न सक्छौँ', केलीले मंगलवार कांग्रेसमा भने, 'उनीहरुले इन्टरनेटमा के के गर्दा रहेछन् भनेर हेर्न चाहन्छौँ । यदि उनीहरुले सहयोग गर्दैनन् भने अमेरिकामा नआउन् ।'
एनबीसी न्युजको समाचार अनुसार केलीले कांग्रेसलाई मुसलमानको बाहुल्यता रहेका सात देशका शरणार्थी र भिसा आवेदकको जाँचका लागि चाल्न लागिने अन्य कदममा यी पनि समावेश गरिएका छन् ।
उनको यो भनाई डोनाल्ड ट्रम्पले कार्यकारी आदेशमार्फत सात मुस्लिम राष्ट‍्रका आप्रवासीलाई अमेरिका आउन प्रतिबन्ध लगाएको बारेमा न्यायाधीशले अध्ययन गरिरहेका बेला आएको हो ।
ट्रम्पको आदेशमा अहिले न्यायाधीशहरु तगारो बनिरहेका छन् । उनीहरुले सिरिया, इराक, इरान, सोमालिया, सुडान, लिबिया र यमनका धेरैजसो शरणार्थी र यात्रीलाई अमेरिका प्रवेशमा ट्रम्पले लगाएको प्रतिबन्धविरुद्ध आदेश पनि दिइरहेका छन् ।
डोनाल्ड ट्रम्पबाट नियुक्त केलीले अमेरिका प्रवेश अघि सुरक्षा जाँचका लागि जुनसुकै देशमा नागरिकसँग पनि उनीहरुका सामाजिक सञ्जालका पासवर्ड माग्नु अन्य जाँचसरह हुने बताएका छन्।
यी सात देशसँगै अन्य देशका नागरिकको पनि पासवर्ड माग्ने प्रावधानलाई कानुनीरुपमा दिन आफूहरु प्रयासरत रहेको उनको भनाई थियो ।
डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका फेसबुक सामाजिक सञ्जाल आप्रवासी